Nharaunda | Chikunguru 2021
Kambani Nhau Info Info, Nhau Nharaunda, Wellness Dhinda Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Checkout Info Info, Hutano Dzidzo Hutano Dzidzo, Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda Wellness Nhau, Wellness Kambani, Iyo Checkout
Ona zviri kutaurwa nevashandisi veSingleCare-uye kuchengetedza
Heano mamwe emhando dzakanakisa dzekuchengetedza mishonga vashandisi veSingleCare vakagovana muChirimo 2020. Akafuridzirwa? Siya yako wega SingleCare ongororo pane edu enhau midhiya.
Sezvo iwe uchitenga zvipo zvehoridhe, funga nezvekutenga kubva kumakambani gumi nemaviri anodzosera kumasangano ekuvandudza hutano hwevanhu pasirese.
Izvo zvakaita sekugara nekushushikana
Vanhu vazhinji vanonzwa kutya kana kushushikana pane imwe nguva, asi kana iwe uchinge uchirarama nekuzvidya mwoyo, iko kusagadzikana kunzwa hakutombonyatsobva. Heino nzira yekugadzirisa nayo.
Zvinoita sekugara nekushushikana: Chinyorwa chega
Kune chero munhu kunze uko anorarama nekushushikana, ziva izvi: Haasi iwo mugumo. Nokurapwa kwakakodzera, unogona kurarama hupenyu hwakajairika.
Mawaniro andakaita chirwere chakakodzera cheshuga — uye ndakadzidza kurarama nacho
Ndakabatwa ndine Type 2 chirwere cheshuga makore makumi maviri apfuura. Hezvino izvo zvandakadzidza nezve kurarama nechirwere cheshuga-uye nekuchirapa.
Izvo zvakaita sekugara ne endometriosis
Mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu evakadzi pasi rese vari kurarama neindometriosis. Ndinoziva kuti handisi ndega, asi izvozvo hazvibatsire kurwadziwa. Hezvino zvinoita.
Izvo zvakaita sekugara ne hypothyroidism
Ndanga ndichigara ne hypothyroidism kubvira ini ndaive nemakore 18. Izvo hazvina kumbonditadzisa kurarama hupenyu hwangu hwakanakisa-ingo ita chokwadi chekutsvaga chiremba ari pauri iwe.
Izvo zvakaita sekurera mwana nevechidiki idiopathic arthritis (JIA)
Juvenile idiopathic arthritis chirwere chinodzivirira apo muviri unorwisa majoini. Ndine mwana anogara neJIA, uye ndoomaitiro anoita mhuri yedu.
Izvo zvazviri chaizvo sekugara ne psoriasis
Psoriasis mamiriro eganda. Asi kurarama ne psoriasis, kune chaiko kunetseka kwepfungwa uye kwepamoyo. Kurapwa nenzira kwayo kunogona kubatsira — usakanda mapfumo pasi.
Kurarama uine mamiriro ekuti vafambi vanofunga kuti uri ‘mudiki kwazvo’ kuti uwane
Yakatanga nekurwadziwa pamwe chete, kuomarara kwemangwanani, uye kuneta. Ipapo mhinduro dzangu dzekuyedza dzakazvisimbisa, ndinenge ndichigara nechirwere cherheumatoid arthritis kubva zvino zvichienda mberi.
Kutenderera uchitenderera: Izvo zvakaita sekuona vertigo
Kunzwa kwekuramba uchitenderera kunonakidza semwana, asi semunhu mukuru? Hazvisi. Kugara ne vertigo kunonetsa, nerombo rakanaka kune mishonga inoshanda.
Kudzora kusadzora: Kugara neOCD munguva yedenda
1 mu 40 vanhu vakuru vari kugara neOCD muU.S., uye COVID-19 denda rakanganisa mamiriro avo. Heano matipi ekurwisa OCD panguva isina chokwadi nguva.
Migraine ine aura uye mapiritsi ekudzivirira kubereka: Mubatanidzwa une njodzi?
Migraine ne aura uye kuberekwa kunogona kuwedzera njodzi yako yekurohwa. Verenga nyaya yemumwe mukadzi uye dzidza nezve migraine-yakachengeteka nzira dzekuzvarwa nadzo.
Maitiro andakazoziva-uye ndinorarama ne-premenstrual dysphoric disorder (PMDD)
5% -10% yevakadzi vane premenstrual dysphoric kusagadzikana. Munguva pfupi yapfuura, vakadzi vazhinji vanga vachitaurira yavo PMDD nyaya nezve izvo zvakaita sekugara ne PMDD.
Maitiro andakaita kufamba nekenza yemukondombera kuongororwa panguva yekuzvitakura
Ndakabatwa chirwere chegomarara remuromo wechibereko ndichine pamuviri. Ini zvino ndine mwana akagwinya uye handina gomarara- asi ndakadzidza zvakawanda nezve HPV nepamuviri munzira.
Kadhi rekuchengetedza rinoita mutsauko one Rx panguva
Kuchengetedza $ 40 pano kana uko kunogona kunge kusingaite kunge kwakawanda asi kunowedzera nekukurumidza. Heano mabatiro anoita FamilyWize vanhu kuburikidza neiyo Medicare yekuvhara gap uye COVID-19.
Maitiro ekusevha pane iyo Freestyle Libre neSingleCare
Freestyle Libre glucose yekutarisa masisitimu anogona kuve anodhura. Mari yemari yesenenzi yakatenderedza $ 129.99, asi iwe unogona kusevha neKegaCare kadhi rekuchengetedza.
Yedu-yenguva-nguva yaunofarira Imwechete Kuchengeta nyaya
Mukuremekedza SingleCare Svondo Yekuchengetedza, isu takaunganidza edu ese-nguva anodikanwa eSegaCare ongororo kupemberera zvinhu zvese zvakatemerwa kuchengetedza-zvine chekuita.
Ona akanakisa Ongororo dzeMumwechete kubva muna Kukadzi
Rudo rwaive mumhepo mwedzi uno, uye isu tanga tichirunzwa mune idzi SingleCare ongororo. Verenga zvakataurwa nevashandisi nezve yavo yekuchengetedza mishonga.
Iwo akanakisa eSpecialCare ongororo munaNovember
Isu tinogara tichitenda nharaunda yedu yeSingleCare. Idzi ndidzo dzatinofarira ongororo dzeSingleCare uye nhoroondo dzekuchengetedza mishonga kubva munaNovember.
ndiyo tylenol kana ibuprofen zvirinani kune fivhiri
chii chinokonzera pasi potasium muropa
kurongedza sei mishonga yekufamba nendege
mubatanidzwa kurapwa venlafaxine uye bupropion mhedzisiro
zvinotora nguva yakareba sei kuti dilaudid ishande
unogona here kutora mhasuru yekuzorodza ine anti kupisa
zvinotora nguva yakareba sei kuti sudafed pe ishande